Lalao tokotany Heroes aterineto. Play maimaim-poana
Lalao tokotany Heroes an-tserasera
trano fidiovana Roll
Manorotoro ny Phone
Viking ny tranombahiny
Andy Cosplay Disney andriambavy
Eritrereto amin'ny teny ny fitenenana
Princess Hotdog mihinana fifaninanana
Fanavotana mahatsikaiky Ilay mpandrafitra
Lalao Online ady lalao Fahaiza-manao Games fikatsahana lalao Funny Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny ankizivavy Puzzle lalao Strategy lalao Fahaiza-manao Games ady Funny Games Arcade Html5
tokotany Heroes (Backyard Heroes ):
Eo anoloantsika dia ny vaovao lalao mahafinaritra avy amin'ny orinasa Backyard Heroes KiZi fantatra developer ny mikasika ny lalao ho an'ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra. Ao ity lalao ity no mahatsiaro ny fahazazana ny tokotaniny andro izao no mpifehy ny mpiambina teo tokotaniny avy amin'ny mpampijaly kely. Noho izany, ny tantara dia tena tsotra, ny ekipa ny olona vitsivitsy tsy maintsy miady indray ny mpampijaly kely rehetra izay ao an- tanàna. Avy any an- tokotany ianao, dia hahita mpanohitra, izay avy hatrany maika anao amin'ny fitaovam-piadiana teny an-tanany, ary ny asa dia mafy ny mampianatra rehetra, be dia be ka fa tsy mampijaly. Amin'ny ekipa telo litera, tsirairay izay manana ny fomba tsy manam-paharoa, fitaovam-piadiana ary fomba ny ady. izy ireo dia hianatra tsara. Raha ny marina, ny sasany amin'izy ireo no nanafika ny iray na maromaro avy hatrany teknika. Amin'ny maha iray amin'ireo endri-tsoratra dia manana ny fahaiza- bahoaka fitsaboana, ny anankiray ho any amin'ny fiarovana ny rehetra ny fahavoazana. Ny lalao dia mitodika - monina, ka mety ho mafana toetra amam-panahy ny sasany dia mivelatra avy amin'ny fifantenana pane, mifidy izay karazana fahaiza-manao azo ampiharina isika ankehitriny. Rehefa tapaka lalan-dra ny tsy hibebaka ny mpanohitra. Tadidio fa nandany ady ho sarotra kokoa amin'ny ambaratonga tsirairay. Ny isan'ny fahavalo dia mitombo, ary toy izany izy ireo dia hanana fahaizana miavaka sasany izay afaka hanisy ratsy anao, na hiarovana ny mpampijaly kely avy amin'ny kapoka. Management dia tena tsotra, ary dia tanterahina amin'ny alalan'ny Tsindrio eo amin'ny mikasika efijery na ny totozy. Game Backyard Heroes manana ny tsara tarehy sy tsy manam-paharoa sary, toa ny endri-tsoratra ho velona. Fotsiny ny asa rehetra atao eo ambanin'ny arahina mozika. Tsy misy famerana taona, toy izany koa ny lalao Backyard Heroes dia hahaliana ny solontenan'ny samy hafa taona. Afaka milalao azy io na an-tserasera sy ny downloading eo amin'ny takelaka, ny finday na ordinatera. Raha hilalao mahitsy ao amin'ny Internet ianao dia ho afaka misoratra anarana amin'ny fampiasana ny kaonty amin'ny tranonkala fifaneraserana. Ary ny zava-bitany rehetra, dia navoaka tao amin'ny pejy ary afaka miditra ny isan'ny mafy indrindra mpilalao amin'ity lalao. Asao ny namanao, hiady sy handresy ny ratsy rehetra mpampijaly kely amin'ity lalao. Fotsiny mandany fotoana mahafinaritra sy mampientanentana.